အမျိုးသမီးအလှကုန်လိင်အင်္ဂါခွဲစိတ်ခြင်း - လူနာ၏စရိုက်လက္ခဏာများ၊
မှတ်ချက်များ။ ။ လေ့လာမှုအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်လူနာ ၃၁.၅% တွင်“ အမျိုးသမီးအလှကုန်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းခွဲစိတ်မှု” ကိုပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူများသည်မီဒီယာ (၃၉.၇%) နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောမှတ်ချက်များ (၂၈.၈%) ကိုခွဲစိတ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ “ မီဒီယာ” နှင့်“ အပျက်သဘောဆောင်သောမှတ်ချက်များ” သည်ညစ်ညမ်းသောဆက်စပ်မှုများလည်းမဟုတ်ပါလား။
ဗေဒမြင့်တက်ဂျေ 2018 နိုဝင်ဘာ 13 ။ Doi: 10.1093 / asj / sjy309 ။
Kalaaji တစ်ဦးက1, လေမှုတ်စက်က S2, Maric ငါ3, Schnegg J ကို2, Jönsson V ကို2.
အမျိုးသမီးအလှကုန်လိင်အင်္ဂါခွဲစိတ်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာနေပါတယ်။ သို့သော်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများန်းကျင်ကြီးပြင်းအငြင်းပွားဖွယ်ရာအစီရင်ခံစာများသူတို့၏လက္ခဏာများ, စိတ်ရင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမေးခွန်းထုတ်သည်။ ဒီခွဲစိတ်ဖျော်ဖြေဆန့်ကျင်သတိပေးမတရားလက္ခဏာတွေခွဲစိတ်လျှော့ချရေးကန့်သတ်ရန်ပေလိမ့်မည်။
အမြိုးသမီးမြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းရှုထောင့်အပေါ်ခွဲစိတ်၏ခွဲစိတ်မှု, နှင့်သက်ရောက်မှုကိုစဉ်းစားရန်စတင်သောအခါအအမည်မသိတူးဖော်ရေးမှတဆင့်စာရေးသူ, စိတ်ရှည်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုစူးစမ်း။
125 နှင့် 2010 အကြားအော်စလိုပလတ်စတစ်ခွဲစိတ်ဆေးခန်းမှာအမျိုးသမီးအလှကုန်လိင်အင်္ဂါခွဲစိတ်တဲ့သူ 2016 လူနာ, 69 လူနာက e-mail ဖြင့်လက်လှမ်းမှီခဲ့ကြသည်။ 40 မေးခွန်းများကိုအတူဖြေမေးခွန်းလွှာအမည်ဝှက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ အဖွမြေား QuestBack ပြန်လာမေးလ်စနစ်ကနေတဆင့်တတိယ, လွတ်လပ်သောပါတီလုပ်ငန်းများ၌ခဲ့ကြသည်။
တုန့်ပြန်မှုနှုန်း 77% ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲအချိန် 31.4 လစေ့သတည်းဆိုလို။ လူနာအသက် 30.8 နှစ်ပေါင်းခဲ့ဆိုလို။ ခွဲစိတ်ဘို့တွန်းအား, (69.8%) လက်တွေ့ကျတဲ့ / ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (62.3%) စိတ်ခံစားမှု, နှင့် (54.7%) ရငျးနှီး, (49.1%) အလှကုန်ပစ္စည်းခဲ့ကြသည်။ စိတ်ခံစားမှုအကြောင်းရင်းများပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြသည့်အခါ, မီဒီယာ (39.7%), ညစ်ညမ်း (31.5%), နဲ့အနှုတ်လက္ခဏာမှတ်ချက် (28.8%) ခွဲစိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ လိင်အင်္ဂါစိုးရိမ်မှုများအခြားသူတွေအကြား Self-လေးစားမှုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (63.2%) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု (57.9%) ဖြစ်. , 90.5% 1 တစ်နှစ်ထက်ပိုမိုများအတွက်ခွဲစိတ်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ယေဘုယျအားအလှကုန်ရလဒ် 69.8% များအတွက်စိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကစစ်ဆင်ရေး 75.5% များအတွက်စိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
အသက်အရွယ်, ပညာရေးအဆင့်, ဤခွဲစိတ်မှုခံယူအဘယ်သူသည်လူနာစုစုပေါင်းဝင်ငွေရင်သားကင်ဆာ implants လူနာသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်မြင့်မားတဲ့ပုံရသည်။ လိင်အင်္ဂါမကျေနပ်မှုအစောပိုင်းအသက်တာ၌ထအမျိုးမျိုးသော psychosexual ရှုထောင့်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ အများစုမှာလူနာများခွဲစိတ်မှု၏ရလဒ်ကိုကျေနပ်ဖြစ်ကြပြီးအခြားသူများကိုဤခွဲစိတ်ဖို့အကြံပြုပါတယ်။ အပိုဆောင်းအမည်မသိပေါင်းစုံပါလေ့လာမှုများအကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။